၆ပှဲဆကျ အနိုငျရခဲ့ပွီးနောကျ ဒီနှဈ ဘောလုံး ရာသီ ခယျြလျဆီး အသငျး ရဲ့ မြှျောမှနျးခကျြ ကို ပွောပွလိုကျတဲ့ #လမျးပတျ - SPORTS MYANMAR
၆ပှဲဆကျ အနိုငျရခဲ့ပွီးနောကျ ဒီနှဈ ဘောလုံး ရာသီ ခယျြလျဆီး အသငျး ရဲ့ မြှျောမှနျးခကျြ ကို ပွောပွလိုကျတဲ့ #လမျးပတျ
ခယျြလျဆီး အသငျး ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ခနျြပီယံလိဂျ အုပျစု အဆငျ့ ပှဲစဉျ မှာ အဂေကျြဇျ အသငျး ကို အနိုငျ ရခဲ့တာကွောငျ့ နောကျဆုံး ကစား ခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲစုံ ၆ပှဲဆကျ အနိုငျ ရခဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ ။ ဒါဟာ ရာသီ အစပိုငျး တုနျးက လူ အမြား မထငျထား ခဲ့တဲ့ အခွအေနေ တခု ဖွဈပွီး အခုဆို လမျးပတျ ရဲ့ ခယျြလျဆီး အသငျး ဟာ ပွိုငျပှဲစုံ မှာ အခွအေနေ ကောငျးနတေယျ လို့ ဆိုရမှာ ဖွဈပါတယျ ။
ရာသီ အစပိုငျး မှာ လူ အမြားဟာ ခယျြလျဆီး အသငျး နဲ့ ဖရနျ့ လမျးပတျ တို့ ခနျြပီယံလိဂျ ဝငျခှငျ့ ရရုံတငျ အောငျမွငျမှု ကွီးကွီးမားမား ရမှာ ဖွဈတယျ လို့ သတျမှတျ ခဲ့ကွပါတယျ ။ သို့ပမေယျ့ လညျး အခုအခါ မှာ ခယျြလျဆီး အသငျး ဟာ အမှတျပေး ဇယား ထိပျက လီဗာပူး အသငျး နဲ့ ၈မှတျသာ ကှာဟ တော့တာ ဖွဈပါတယျ ။
ခယျြလျဆီး အသငျး နညျးပွ ဖရနျ့ လမျးပတျ ကတော့ အခုလို နောကျဆုံး ၆ပှဲဆကျ အနိုငျ ရလဒျ ဟာ ၄ငျးတို့ရဲ့ ဒီနှဈ ဘောလုံး ရာသီ ပဈမှတျ က ပွောငျးလဲခွငျး မရှိကွောငျး နဲ့ တပှဲပွီး တပှဲ အနိုငျ ရဖို့ အတှကျပဲ အဓိက ဦးတညျထားကွောငျး ၊ ဘယျလို ကွီးမားတဲ့ ရလဒျ ပဲ ဖွဈဖွဈ အရမျး စိတျမလှုပျရှား မိဖို့ လိုကွောငျး ဆိုခဲ့ပါတယျ ။
လမျးပတျ က ” နောကျဆုံး ၆ပှဲဆကျ အနိုငျ ရလဒျ က ကြှနျတျော တို့ အသငျး ရဲ့ ပဈမှတျ ကို ပွောငျးလဲ စလေား ? No ပါ ။ ကြှနျတျော တို့ရဲ့ ပဈမှတျ က အရငျ အတိုငျးပါပဲ ။ အရှေ့ ပှဲ ရလဒျ က ရှုံးသညျ ဖွဈစေ ၊ နိုငျသညျ ဖွဈစေ ။ နောကျပှဲ အကွောငျးပဲ ခေါငျးထဲမှာ ထညျ့ထားပါတယျ ။ ကြှနျတော့ အနနေဲ့ အမြားကွီး ရှကြေ့ျော မစဉျးစား ခငျြသေးပါဘူး ။ အခု လောလောဆယျ ရလဒျကောငျး တှကွေောငျ့ ကြှနျတျော ပြျောရှငျ ဝမျးသာ နရေတာတော့ မှနျပါတယျ ။ ”
” ဒီလို ရလဒျကောငျး တှေ ဆကျတိုကျ ရယူနိုငျမှု ကို ကြှနျတျော တို့ ဆကျထိနျး ရမှာ ဖွဈသလို ၊ ရှလြေှ့ောကျ ကိုယျ့ အသငျး ရဲ့ ခွစှေမျး အဆငျ့အတနျး မလြော့ကြ သှားဖို့ အတှကျလညျး အပွညျ့အဝ အာရုံစိုကျ ရမှာ ဖွဈပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့မို့ အခု အနအေထား ကို ကြှနျတျော ပုံကွီးခြဲ့ မပွောခငျြ သေးပါဘူး ။ အရမျး လညျး စိတျမလှုပျရှား နပေါဘူး ။ ကြှနျတော့ ကို ပိုပွီးတော့တောငျ အလုပျ ပိုကွိုးစားခငျြစိတျ ဖွဈလာပါတယျ ။ ” လို့ ပွောကွား ခဲ့ပါတယျ ။
ဆကျလကျပွီး လမျးပတျ က နောကျဆုံး ၂ပှဲဆကျ Clean Sheet ရယူ နိုငျခဲ့ခွငျး နဲ့ ပတျသကျပွီး လညျး ” ဒါဟာ နောကျဆုံး တပတျ အတှငျး ကြှနျတျော တို့ အတှကျ ကွီးကယျြတဲ့ အခကျြအလကျ တခု ဖွဈပါတယျ ။ နယူးကာဆယျ ဟာ ကြှနျတျော တို့ အတှကျတော့ မတူညီတဲ့ စိနျချေါမှု တခုပါ ။ နယူးကာဆယျ မတိုငျမီ က ဒီရာသီ စတမျးဖို့ဒျ ဘရဈချြ ကို လာပွီး ခံစဈ အသားပေး ဆော့တဲ့ အသငျး မတှခေဲ့ဖူးတာကွောငျ့ ကြှနျတျော တို့ အတှကျ အရမျး ခကျခဲ ခဲ့ရပါတယျ ။ ”
” မြှမြှတတ ပွောရရငျ ပွိုငျဖကျ အသငျး ကစားတာ အရမျး ကောငျးခဲ့ပါတယျ ။ ကြှနျတျော တို့ ဖကျကတော့ ပှဲကို စိုးမိုးခဲ့တယျ ၊ အခှငျ့အရေး မြားစှာ ဖနျတီး နိုငျခဲ့ပါတယျ ။ တဂိုး နဲ့ ကပျနိုငျဖို့ အတှကျ ဆိုတာ Clean Sheet ကို ရယူ နိုငျဖို့က အရေးကွီးပါတယျ ။ အဂေကျြဇျ အသငျး ကတော့ ကြှနျတျော တို့ အတှကျ မတူညီတဲ့ သားကောငျး တကောငျပါ ။ သူတို့ကို အနိုငျ ရခဲ့ခွငျး ဟာ ကြှနျတော့ ကို စိတျအခမျြးသာဆုံး နဲ့ အပြျောရှငျဆုံး လို့ ပွောရပါမယျ ။ ”
” ကြှနျတျော တို့ဟာ နညျးစနဈပိုငျး အရမျး ကောငျးတဲ့ အသငျး ၊ လုပျအားနှုနျး နဲ့ တိုကျစဈ ကစားဟနျ အကောငျးဆုံး အသငျး နဲ့ ရငျဆိုငျ ခဲ့ရတာပါ ။ ဒါကွောငျ့မို့ ဖကျက ကွိုးစားမှု က အရမျး အရမျး ကွီးမားဖို့ လိုခဲ့ပါတယျ ။ အဲ့ဒီပှဲ မှာ ကြှနျတျော တို့ရဲ့ ခံစဈ စှမျးဆောငျရညျ က အံ့မခနျး ကောငျးခဲ့ပါတယျ ။ အကျဇျပီလီကှီတာ ဟာ ၆ကိုကျစညျး အတှငျးမှာ တောကျလြှောကျ ဖကျြထုတျမှု တှေ လုပျခဲ့ပါတယျ ။ ”
” အသငျးလိုကျ ပွိုငျဖကျ အသငျး ရဲ့ တိုကျစဈ ကို အဆငျ့ဆငျ့ ခုခံ ခဲ့ကွပါတယျ ။ ဒီလို တိုကျစဈ အရမျး ကောငျးတဲ့ အသငျး နဲ့ တှတေဲ့ အခါ မှာ ကြှနျတျော တို့ရဲ့ ခံစဈ က အရမျး ကဈြလဈြဖို့ လိုအပျ ခဲ့ပွီး ဒါကို ပွသ နိုငျခဲ့ပါတယျ ။ ” လို့ ပွောကွား ခဲ့ပါတယျ ။
၆ပွဲဆက် အနိုင်ရခဲ့ပြီးနောက် ဒီနှစ် ဘောလုံး ရာသီ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ မျှော်မှန်းချက် ကို ပြောပြလိုက်တဲ့ #လမ်းပတ်
ချယ်လ်ဆီး အသင်း ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စု အဆင့် ပွဲစဉ် မှာ အေဂျက်ဇ် အသင်း ကို အနိုင် ရခဲ့တာကြောင့် နောက်ဆုံး ကစား ခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲစုံ ၆ပွဲဆက် အနိုင် ရခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါဟာ ရာသီ အစပိုင်း တုန်းက လူ အများ မထင်ထား ခဲ့တဲ့ အခြေအနေ တခု ဖြစ်ပြီး အခုဆို လမ်းပတ် ရဲ့ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ဟာ ပြိုင်ပွဲစုံ မှာ အခြေအနေ ကောင်းနေတယ် လို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ရာသီ အစပိုင်း မှာ လူ အများဟာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း နဲ့ ဖရန့် လမ်းပတ် တို့ ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ခွင့် ရရုံတင် အောင်မြင်မှု ကြီးကြီးမားမား ရမှာ ဖြစ်တယ် လို့ သတ်မှတ် ခဲ့ကြပါတယ် ။ သို့ပေမယ့် လည်း အခုအခါ မှာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ဟာ အမှတ်ပေး ဇယား ထိပ်က လီဗာပူး အသင်း နဲ့ ၈မှတ်သာ ကွာဟ တော့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ချယ်လ်ဆီး အသင်း နည်းပြ ဖရန့်် လမ်းပတ် ကတော့ အခုလို နောက်ဆုံး ၆ပွဲဆက် အနိုင် ရလဒ် ဟာ ၄င်းတို့ရဲ့ ဒီနှစ် ဘောလုံး ရာသီ ပစ်မှတ် က ပြောင်းလဲခြင်း မရှိကြောင်း နဲ့ တပွဲပြီး တပွဲ အနိုင် ရဖို့ အတွက်ပဲ အဓိက ဦးတည်ထားကြောင်း ၊ ဘယ်လို ကြီးမားတဲ့ ရလဒ် ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အရမ်း စိတ်မလှုပ်ရှား မိဖို့ လိုကြောင်း ဆိုခဲ့ပါတယ် ။
လမ်းပတ် က ” နောက်ဆုံး ၆ပွဲဆက် အနိုင် ရလဒ် က ကျွန်တော် တို့ အသင်း ရဲ့ ပစ်မှတ် ကို ပြောင်းလဲ စေလား ? No ပါ ။ ကျွန်တော် တို့ရဲ့ ပစ်မှတ် က အရင် အတိုင်းပါပဲ ။ အရှေ့ ပွဲ ရလဒ် က ရှုံးသည် ဖြစ်စေ ၊ နိုင်သည် ဖြစ်စေ ။ နောက်ပွဲ အကြောင်းပဲ ခေါင်းထဲမှာ ထည့်ထားပါတယ် ။ ကျွန်တော့ အနေနဲ့ အများကြီး ရှေ့ကျော် မစဉ်းစား ချင်သေးပါဘူး ။ အခု လောလောဆယ် ရလဒ်ကောင်း တွေကြောင့် ကျွန်တော် ပျော်ရွှင် ဝမ်းသာ နေရတာတော့ မှန်ပါတယ် ။ ”
” ဒီလို ရလဒ်ကောင်း တွေ ဆက်တိုက် ရယူနိုင်မှု ကို ကျွန်တော် တို့ ဆက်ထိန်း ရမှာ ဖြစ်သလို ၊ ရှေ့လျှောက် ကိုယ့် အသင်း ရဲ့ ခြေစွမ်း အဆင့်အတန်း မလျော့ကျ သွားဖို့ အတွက်လည်း အပြည့်အဝ အာရုံစိုက် ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့်မို့ အခု အနေအထား ကို ကျွန်တော် ပုံကြီးချဲ့ မပြောချင် သေးပါဘူး ။ အရမ်း လည်း စိတ်မလှုပ်ရှား နေပါဘူး ။ ကျွန်တော့ ကို ပိုပြီးတော့တောင် အလုပ် ပိုကြိုးစားချင်စိတ် ဖြစ်လာပါတယ် ။ ” လို့ ပြောကြား ခဲ့ပါတယ် ။
ဆက်လက်ပြီး လမ်းပတ် က နောက်ဆုံး ၂ပွဲဆက် Clean Sheet ရယူ နိုင်ခဲ့ခြင်း နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လည်း ” ဒါဟာ နောက်ဆုံး တပတ် အတွင်း ကျွန်တော် တို့ အတွက် ကြီးကျယ်တဲ့ အချက်အလက် တခု ဖြစ်ပါတယ် ။ နယူးကာဆယ် ဟာ ကျွန်တော် တို့ အတွက်တော့ မတူညီတဲ့ စိန်ခေါ်မှု တခုပါ ။ နယူးကာဆယ် မတိုင်မီ က ဒီရာသီ စတမ်းဖို့ဒ် ဘရစ်ခ်ျ ကို လာပြီး ခံစစ် အသားပေး ဆော့တဲ့ အသင်း မတွေ့ခဲ့ဖူးတာကြောင့် ကျွန်တော် တို့ အတွက် အရမ်း ခက်ခဲ ခဲ့ရပါတယ် ။ ”
” မျှမျှတတ ပြောရရင် ပြိုင်ဖက် အသင်း ကစားတာ အရမ်း ကောင်းခဲ့ပါတယ် ။ ကျွန်တော် တို့ ဖက်ကတော့ ပွဲကို စိုးမိုးခဲ့တယ် ၊ အခွင့်အရေး များစွာ ဖန်တီး နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ တဂိုး နဲ့ ကပ်နိုင်ဖို့ အတွက် ဆိုတာ Clean Sheet ကို ရယူ နိုင်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ် ။ အေဂျက်ဇ် အသင်း ကတော့ ကျွန်တော် တို့ အတွက် မတူညီတဲ့ သားကောင်း တကောင်ပါ ။ သူတို့ကို အနိုင် ရခဲ့ခြင်း ဟာ ကျွန်တော့ ကို စိတ်အချမ်းသာဆုံး နဲ့ အပျော်ရွှင်ဆုံး လို့ ပြောရပါမယ် ။ ”
” ကျွန်တော် တို့ဟာ နည်းစနစ်ပိုင်း အရမ်း ကောင်းတဲ့ အသင်း ၊ လုပ်အားနှုန်း နဲ့ တိုက်စစ် ကစားဟန် အကောင်းဆုံး အသင်း နဲ့ ရင်ဆိုင် ခဲ့ရတာပါ ။ ဒါကြောင့်မို့ ဖက်က ကြိုးစားမှု က အရမ်း အရမ်း ကြီးမားဖို့ လိုခဲ့ပါတယ် ။ အဲ့ဒီပွဲ မှာ ကျွန်တော် တို့ရဲ့ ခံစစ် စွမ်းဆောင်ရည် က အံ့မခန်း ကောင်းခဲ့ပါတယ် ။ အက်ဇ်ပီလီကွီတာ ဟာ ၆ကိုက်စည်း အတွင်းမှာ တောက်လျှောက် ဖျက်ထုတ်မှု တွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ် ။ ”
” အသင်းလိုက် ပြိုင်ဖက် အသင်း ရဲ့ တိုက်စစ် ကို အဆင့်ဆင့် ခုခံ ခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒီလို တိုက်စစ် အရမ်း ကောင်းတဲ့ အသင်း နဲ့ တွေ့တဲ့ အခါ မှာ ကျွန်တော် တို့ရဲ့ ခံစစ် က အရမ်း ကျစ်လျစ်ဖို့ လိုအပ် ခဲ့ပြီး ဒါကို ပြသ နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ” လို့ ပြောကြား ခဲ့ပါတယ် ။